Guurka Khasabka ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Guur wuxuu dhicikaraa kaliya hadii ey jirto madaxbanaani iyo ka raali noqosho buuxda
taas waa ku dhawaaqida qaramada midoobay ee xuquuqda baniaadanka
Caawin waad helikartaa
– la hadal dad
Warbixin loogu talagalay dhalinyarada oo ku saabsan guurka qasabka ah Maxaad adiga go,aansankartaa?
Inaad saaxiib yeelankarto?
Qofkaad is guursaneysaan
Ma,jiri qof inuu guursado lagu qasbaayo. Taas waxey ku cadahay xuquuqda baniaadanka iyo sharciga noorweey.
Bulshooyin baddan ayaa waxey hiddo u leeyihiin guurka labada qof leysa siiyo, meeshaas lagu xaqiijinayo in caruurta ey helaan guur fiican ahna masuuliyad waalidka saran. Guurka ah labo qof oo leysa siiyay waa laga ogolyahay waddanka Noorweey, hadii uu yahay mid u dhaca si madaxbanaan oo ey tahay waxey rabaan labada qof ee is guursanaya.
Xaqa iyo sharciga
shegeyso in guur uu ku dhaco si madaxbanaan oo raali lagayahay. Macnaheedu wa in kuwa is
guursanaya ey iskood isku raacaan Sharciga Noorweey waxaa ku qoran in guur uu dhicikaro markuu ka yimaado kuwa is guursanaya, iyo iney dumarka iyo ragaba ey xaqa u wadda simanyihiin markey timaado doorashada lamaanaha kale. Kuwa is guursanaya waa iney da,adooda ka sareysaa 18 jir. Dadka wadda dhadiga ah iyo kuwa wadda labka ah wey is guursankaraan. Ku cadaadin ama ku qasbid qof inuu guursado waa mamnuuc ciqaab muddan waddanka Noorweey. Taas waxey quseysaa xitaa haduu guurka ka dhaco waddanka dibadiisa oo aadna dagantahay Noorwey. Guur ku dhacay cadaadis iyo qasab waxaa laga soo qaadikaraa midaan la aqoonsan. Marka guurka laga soo qaadayo midaan la aqoonsan waxaa qofka loo diwaangalinayaa in uusan guursan, ee loo diwaangalinmaayo in la kalatagay. Qaramada midoobay waxey ku dhawaaqday in xuquuqda baniaadanka ey noo
Guurka qasabka ah kuma saabsana oo kaliya qofkoo jir ahaan loo qasbo oo gacanqaadna loo geysto, laakiin intabaddan wuxuu ku saabsanyahay cadaadis maskaxeed oo in mudo ah socda iyo dhaliyarada daacadey u yihiin waalidkood. Waalidka waxey ku dhihikaraan hadii kuwa kale ee qoyska ka tirsan ey is xumeeyaan ama xanuunsadaan , ama qoyska sumcadiisi iyo sharaftiisii hoos u dhacdo adigaa keenay oo ka masuul ah. Waxaa laga yaabaa in waalidkaa ey aad kuugu qeyliyaan, markaas oo aad is tiraahdo waxey wax ku fududaankaraan adoo sameeya waxey ku leeyihiin? Qaar waxey ku hanjabaan in qoyska uu caruurta deyrinayo hadeynan maqlin waalidka. Tan waxey keentaa dareen qoomamo oo aad kuu cabsigaliya, waana qaab cadaadis maskaxeed oo halis ah.Dhalinyarada waxey dareemikaraan in la koontaroolayo oo la cadaadinayo iyo qasab markey dooranayaan asaxaabtooda, dharka,waqtigey firaaqada leeyihiin iyo waxbarashada.
Guur ka dhacay waddanka dibadiisa lagama aqoonsana Noorweey hadii:
Mid ka,mid ah labada is guursanaya uu ka yaryahay 18 jir markey is guursanayaan.
Guurkoo dhaca ayadoo mid ka,mid ah labada is guursanaya uusan goobjoog aheyn markuu meherka dhacayo
Mid ka,mid ah labada is guursanaya uu xaas yahay. Sharciyadan/xeerarkaan waxey qabanayaan hadii labada is guursanaya midkood uu daganyahay Noorweey marka guurka uu dhacayo
Adigaa go,aansanaya hadaad rabto inaad guursato
In leysku guursado madaxbanaani oo ey qofka ka timaado macnaheedu waa inaad adiga go,aansataa hadaad rabto inaad guursato, qofkaad is guursaneysaan iyo goortaad rabto inaad guursato. Faragalinta qoyska hadii ey noqoto cadaadis ama qasab, taas waxaa loogu yeeraa guurka qasabka ah.
Diin aqbashaa ma,jirto guurka qasabka ah
Waa macquul in la helo caawin
Hadii ka baqeyso in laguu guuriyo adigoo rabin waa hali inaad u dhoofto waddanka Noorweey dibadiisa. Wey adkaankartaa in lagugu caawiyo waddanka dibadiisa. Taas owgeed waa muhiim inaad caawin doonataa intaadan bixin.
Fiiri baalka ku xiga kan oo ey ku qoranyihiin meelahaad la xiriirikarto haduu ku heysto cadaadis, koontarool, gacanqaad ama aad ka baqeyso in laguu guuriyo adigoon rabin. Adigaa go,aansanaya hadaad rabto inaad guursato.
Dad kala hadal haduu qilaaf gurigiina ka jiro
Caawimo raadso intaadan u bixin waddanka dibadiisa hadaad ka walwalsanyahay in laguu guuriyo
Xageed caawin ka helikartaa?
Laanqeyrtacas teleefankeeda ee guurka qasabka ah iyo gudniinka fircooniga ah
Laanqeyrtacas teleefankeeda waa mid warbixin oo loogu talagalay waddankoo dhan, halkaas oo ey ku waaninayaan dad aqoon u leh mawduucan, waxeyna kaa caawinayaan sidaad ola xiriirilaheyd goobaha dowlada ee dadka caawiya.
Wac teleefanka 815 55 201 (isniinta ilaa jimcaha, saacada 09.00 ilaa 17.00), iimeylka: info.tvangsekteskap@redcross.no.
Kalkaalisada caafimaad/la taliyaha arimaha waxbarashada/ maclinka arimaha bulshada ee iskuulka
Dugsiyada dhexe iyo kuwa sare waxaa ka jira rug caafimaadka qaabilsan, macalin arimaha bulshada qaabilsan iyo la taliye xaga waxbarasho oo la hadlikarto. Iyaga xitaa waxey kaa caawinkaraan si aad ola xiriirto meelahakale ee aad ka helikarto caawin. Waxaad xitaa la xiriirikartaa rugta caafimaadka ee dhalinyarada. Rugta caafimaad ee kuugu dhow iyo warbixinada ku saabsan goobahakale ee caafimaadka waxaad ka helikartaa: www.unghelse.no
Heyada badbaadinta caruurta
Hadii aad ka yartahay 18 jir waxaad la xiriirikartaa heyada caruurta badbaadisa. Heyada caruurta badbaadisa waxey caawisaa caruurta dhibka ka heysto gurigooda, fiiri www. barnevernet.no. Heyada badbaadinta caruurta waxey xafiis ku leedahay degmokasta. Kalkaalisada caafimaadka ee joogta iskuulka ayaa kaa caawinkarta si aad ola xiriirto heyada badbaadinta caruurta. Waxaad xitaa warbixin ka helikartaa shabakada degmada ee internetka ama waxaad wacikartaa degmadaada.
Hoyga loogutalagalay qofka u baqaaya naftiisa
Degmokasta waxaad ka heleysaa hoyga loogutalagalay qofka u baqaaya naftiisa rag iyo dumarba ee ka weyn 18 jir. Waxaad la xiriirikartaa degmadaada ama hoyga qofka naftiisa u baqaaya. Hoyga qofka naftiisa u baqaaya wuu furanyahay markasta oo dadkuu siiyaa fursad ey kulahadlaan, ku dhixid, waardiyeyn iyo la socosho in mudo ah.
Teleefoonka heeganka ee loogutalagalay caruurta iyo dhalinyarada
Teleefanka heeganka ah waa bilaash wuxuuna shaqeeyaa marka heyada badbaadinta caruurta ey eysan shaqeyneynin. Laga bilaabo saacadu markey tahay 15.00 ilaa 18.00 xili walba. Telefoonka 116 111 (dibada kasoo waceyso 00 47 95 41 17 55), SMS 41 71 61 11, iimeylka: alarm@116111.no.
Waardiyeyaasha heyada badbaadinta caruurta
Waardiyeyaasha heyada badbaadinta caruurta waxey shaqeeyaan marka xafiisyadakale ey xiranyihiin. Waad la soo xiriirikartaa haduu dhib ku heysto oo aad u baahantahay caawin degdeg ah. Wac 116 111 si laguugu gudbiyo waardiyaha heyada badbaadinta caruurta ee degmadaada. Hadii eysan jirin waardiye heyada badbaadinta caruurta ama ey xirantahay, waxaa teleefonkaaga loo gudbinayaa teleefoonka heeganka ah. Waxii warbixin ah iyo meelahaad ka helikarto waardiyeyaasha badbaadinta caruurta waxaad fiirisaae: www.barnevernvakt.no
Hadaad u baqeyso amaankaaga ama aad rabto inaad qof ku dacweyso inuu ku cadaadinayo, ku qasbayo, ama uu kuu gacanqaadayo, waxaad la xiriirikartaa booliska. Waxey kaa caawinayaan si aad u hesho ciwaan qarsoon, waxaa lagu siinayaa alaarmi aad taabaneyso hadaa u baqeyso amaankaaga iyo waxii kaloo kaalmo ah oo ku saabsan amaanka, adoon qof dacweynyn xitaa waad helikartaa kaalmadaas. Teleefoonka: 02800. Teleefanka booliska ee markaad caawin u baahantahay waa 112.
Haduu ku heysto cadaadis iyo in lagugu qasbaayo guur waxaad xaq u leedahay qareen bilaash ah xitaa hadaadan rabin inaad booliska ku dacweyso arintaan. Waxaad helikartaa warbixin iyo kaalmo xaga amaanka ah. Hadii aad rabto inaad booliska ku dacweyso arintaan waxaa ku caawinkara qareen aadan u baahneyn inaad ka bixiso lacag.
Dhalinyarada ey qoyskooda is qilaafsanyihiin waxey la xiriirikaraan xafiiska badbaadinta qoyska. Hadii aad rabto waxaa lagaa caawinayaa sidaad ola hadlilaheyd waalidkaa, laakiin waad imaankartaa kaligaa oo waad ka doodikartaa dhibaatada adiga ku heysata. Shabakada www.bufetat.no kwaxaad ka helikartaa xafiiska kuu dhow.
Deegaanka iyo garabistaaga
Waxaa jira deegaan iyo garabistaag loogutalagalay dhalinyarada ka yar ama ka weyn 18 jir ey la soo gudboonaato in lagu qasbo guur ama gacanqaad la xiriira sharafta. Fursadaan waxaa loogu talagalay dhalinyarada la kulma hanjabaad ama qilaaf halis ah oo ka dhexeeya ayaka iyo qoyskooda una baahan meel ey degaan oo lagu ilaaliyo waana lalla soconayaa in mudo ah. Hadii aad ka yartahay 18 jir waxaad la xiriirikartaa heyada badbaadinta caruurta. Hadii aad ka weyntahay 18 jir waxaad la xiriirtaa xubnaha aqoonta u leh ee kasoo horjeeda guurka qasabka ah, maalinkasta saacada markey tahay 09.00 ilaa 16.00, teleefoonk: 47 80 90 50, iimeylka: kompetanseteamet@imdi.no hadaad ka weyntahay 18 jir oo aad ku jirto xaalad degdeg ah, la xiriir hoyga kuugu dhaw ee loogu talagalay dadka u baqaaya naftooda.
Shaqaalaha ka shaqeeya xeryaha ey deganyihiin dadka magangalyodoonka ah
Hadii aad degantahay xerada loogu talagalay magangalyodoonka waxaad la xiriirikartaa shaqaalaha ka shaqeeya xeradaas. Wey ku waaninkraan oo waxey kaa caawinkaraan sidaad ola xiriirilaheyd meelahaad ka heleyso caawin.
Skeivverden wey ku waaninayaan waxeyna caawiyaan dadka kasoo jeeda kuwa laga badanyahay ee jeclaada am ka hela qof ey isku jinsi yihiin. Iimeylk: info@skeivverden.no, shabakada internetka:www.skeivverden.no
Caawinta waddanka dibadiisa
Hadii aad ku sugantahay waddanka dibadiisa waxaad caawin ka helikartaa safaarada. Shabakada www.norway.info waxaad ka heleysaa ciwaanka, teleefanka iyo iimeylka safaarada ama qunsulka kuu dhaw. Waxaad la xiriirikartaa safaaradkasta eek u taal waddanka dibadiisa teleefoonka
+ 47 23 95 13 00. Waxey kuu gubinaayaan safaarada kuugu dhaw.
Hadaad ka baqeyso in laguu guuriyo adoon raali ka aheyn markaad fasaxa ku joogto waddanka dibadiisa, waxaan kugula talineynaa inaadan dhoofin. Waxaa adkaankara in dowlada Noorweey ey ku caawiso. Hadaad dhooftana muuji taxadar.
SEIF – caawinta loogu talagalay ajnabiga iyo qaxootiga
SEIF waxey usoo gudbineysaa ajnabiga iyo qaxootiga waxii warbixin ah iyo waano. Waxey kaa caawinayaan sidaad ola xiriiri laheyd meelaha kale ee dowlada ee aad ka helikarto caawin. SEIF waxey xafiisyo ku leedahay magaalooyin dhowr ah eek u yaal Noorwey. Teleefoonka: 22 03 48 30, iimeylka: seif@seif.no, shabakada internetka: www.seif.no
Si qarsoodi ah ayaad suaal u weydiinkartaa
Shabakada www.ung.no/oss si qarsoodi ah ayaad suaal u weydiinkartaa waana lagaaga jawaabayaa waxii quseeya guurka qasabka ah.
La hadal la taliye, kalkaaliso caafimaad ama qof aad ku kalsoontahay inta aadan dhoofin
Sii teleefanka, ciwaanka, iyo magaca meeshaad u dhoofeyso
U dhiib sawirka baasaboorkaaga qofaad aamineyso iyo qoraal balan ah oo kula balameys iney booliska la xiriiraan hadii aad soo laabanweydo xiligaad soo laabanlaheyd sidey balantu aheyd
Qaado lacag dheeraad ah iyo sawirka baasaboorkaaga
Qaado ciwaanka iyo teleefanka safaarada iyo qusulka kuugu dhaw